Budata BT-67 Mpempe Mpempe V2 FSX SP2 & P3D - Rikoooo
downloads 23 730
Onye edemede: Manfred Jahn, Daniel Fuernkaess, Alexander M. Metzger, Hansjoerg Naegele
Emelitere na 04 / 04 / 2019 : Ndakọrịta na Prepar3D v4 enyocha. Auto-installer 10.5
Basler BT-67 maka FSX & P3D: Otu add-on nke pụrụ iche! A na-ahụ ihe ga-eme ọhụụ nke kokpiiti (VC) na HD, na-eme ka ha dị mma ma na-ahụ anya, ụlọ ahụ na mpụga ya dịkwa na HD. Enweghị panel 2D, ụgbọelu ụgbọelu ahụ na-aga nke ọma na nlele 3D. Agụnyere ụdị atọ, na otu n’elu igwe. Ahịrị atọ: Thai AF 158, AWI 'Polar 5' 20 anos AC47T Fantasma. Ihe dị mkpa: Gụọ akwụkwọ.
Basler BT-67 bu ugbo elu nke ugbo elu nke Basler Turbo Conversions nke Oshkosh, Wisconsin. A na-ewu ya na Douglas DC-3 airframe, na ngbanwe ndị e mere iji melite ndụ DC-3 na-arụ ọrụ n'oge niile. Ntughari a na - agụnye ikuku airframe na Pratt & Whitney Canada PT6A-67R engines, gbatịkwuo fuselage, na - eme ka airframe dị elu, nweta nkwalite nke avionics, ma na - eme mgbanwe nye nku na nku nku. (Wikipedia)